China Twin iqhosha lemenyu yahlula umphanda ngaphandle Liner mveliso kunye nabenzi | UNanjing Zhitian
Iimveliso zomkhosi, ukusebenza okuphezulu kokucoca.
Sinako ukwanelisa iimfuno zakho ezahlukeneyo izinto:
Ngokweyilo lokubonakala,Kuvaliwe uMgqomo, uMondli weBarrel, Icala lokuFudumeza iBarrel, iVenting Barrel, iCombi Barrel.
Ngokuqonda kwabathengi, cebisa ezona zinto zibalulekileyo.
Ukuqhubekeka kweempawu kunye neziNzuzo
1. Zonke izinto zecandelo zibonelelwa ziimpawu zokuqala zekhaya okanye i-twin yaseYurophu yokushicilela izinto zokuhambisa izinto, kunye nohlalutyo lwenqaku lwenziwa ukuqinisekisa ukuba izinto ezingafunekiyo ziyinyani;
2. Iqela lobungcali le-R & D alinakho ukubonelela ngemodeli yesampulu ngexesha elifanelekileyo nangokuchanekileyo, kodwa likwabonelela ngeenkonzo zobuchwephesha ngokudityaniswa kwecandelo;
3. Nokuba kungowasekhaya okanye welinye ilizwe owamkela uphawu lomnombo wokuqala, inkampani ineenkcukacha zobuchwephesha kunye nezinto ezizodwa, ezinokubonelela ngenkonzo yeenkonzo zokungxamiseka ngokukhawuleza;
4. Inkqubo yolawulo lwangoku olugqibeleleyo, ukuhlolwa ngokubanzi kwesayizi nganye yemveliso nganye kuqinisekisa ukuba ufumana i-100% yeemveliso ezifanelekileyo, kwaye umgangatho wecandelo ngalinye ulandelwa kuyo yonke inkqubo.
Uluhlu lweScrew Barrel Specification
Umgama weziko / D (MM)
Ngokuya ngesicelo sakho, i-Customing workblank, yamkela ubunzima obukrwada bokuqala bezinto zokwenza imveliso.
Iiseti ezininzi izixhobo processing phambili, imilo ijelo umngxuma yangaphakathi machining erhabaxa peocessing. Ukugqiba isicelo sakho.
Zama umjikelo wamanzi, emva kovavanyo lwenkqubo nganye yokusebenza. Ukuchaneka okuphezulu, nguwe kuphela.
Izixhobo zovavanyo oluphezulu kunye nezixhobo, ukuhlolwa, umgama weziko lovavanyo, ubungakanani bembonakalo, umngxunya, njl. Iphepha elikhutshwe yingxelo yovavanyo esemgangathweni yohlolo lwakho.
Ukupakisha okuqhelekileyo kokuthumela ngaphandle kwimveliso, emva koko usebenzise iphakheji yephepha, i-bubble, elungiswe kwimeko yeplanga, emva kokuqinisekisa ukuhanjiswa.
Egqithileyo I-Twin screw kunye ne-Compound Alloy Liner Barrel
Okulandelayo: I-Twin Screw feed feed koomatshini
I-Twin Screw Bharrel ehambelana nePVC
I-Screw Barrel yeTwin Screw extruder
Twin iqhosha lemenyu kunye Gqibezela nqanawa Umgqomo / Li Lilonke ...
Iibhola ezintathu zokujija ukugcwalisa okuphezulu / i-Masterbatch ...
Ingqele eqengqelekayo mandrel shaft
Imigqomo For Twin Screw extruder, I-Screw Barrel yokuDlula, Kabini Screw extruder, WR15E Shaft, Icandelo le-Screwaii le-Sc65, Iplastiki ye-extruder Screw Barrel,